यौन स्वास्थ्य Archives - Himal Sanchar
Debate: Shrinking Nepali Sex Literature
Kathmandu. When it involves intercourse, the ‘Kamasutra’ written by Maharishi Vatsyayan two thousand years in the past is repeated in Nepali society. Even although intercourse is present in historical artwork from temple tundals, Nepalese society has not but overtly accepted ‘intercourse’. In trendy Nepali literature, as in society, intercourse has not takenaoutstanding place.… Continue reading Debate: Shrinking Nepali Sex Literature
Categorized as National, नेपाली साहित्य, मेन स्टोरी, यौन साहित्य, यौन स्वास्थ्य
महिलाले प्रयोग गर्ने गर्भनिरोधक उपायको बारेमा त धेरैले सुनिरहेका हुन सक्छन् । तर गर्भ निरोधका लागि पुरुषले प्रयोग गर्ने उपाय धेरैको लागि नौलो विषय हुन सक्छ । पुरुषले पनि गर्भनिरोधक उपाय अपनाउन सक्छन् । तर कस्तो अवस्थामा र कसरी पुरुषले गर्भनिरोधक उपाय अपनाउने ? वा कस्ता कस्ता उपायहरू बजारमा पाइन्छ ? यसबारेमा तल केही जिज्ञासा… Continue reading गर्भनिरोधका लागि पुरूषले कस्तो उपाय अपनाउन सक्छन् ?
Categorized as Lifestyle, पुरुष गर्भनिरोधक चक्की, यौन स्वास्थ्य
के हो बाइसेक्सुअल ?
एक भन्दा अधिक व्यक्तिसँग शारीरिक, यौन र भावनात्मक अर्कषण महसुष हुने व्यक्तिलाई ‘बाइसेक्सुअल’ भनिन्छ । समान र विपरीत लिंगका दुई व्यक्तिबीच एकअर्काको सुन्दरतालाई लिएर आकर्षित हुनु चाहि बाइसेक्सुअल होइन । तर, उनीहरु फगत शारीरिक रुपमा आकर्षित मात्र नभई एकअर्कासँग शारीरिक भोग गर्ने इच्छा पनि राख्छन् भने उनीहरु बाइसेक्सुअल हुन् । कुनै व्यक्ति पुरुष छन् ।… Continue reading के हो बाइसेक्सुअल ?
Categorized as Lifestyle, बाइसेक्सुअल, यौन स्वास्थ्य
‘यौनलाई स्वस्थ रुपले स्विकार्नुहोस्’- ओशो
आफ्नो जीवनकालमा ओशोलाई विवादास्पद रहस्यदर्शी, गुरु र आध्यात्मिक शिक्षकका रुपमा हेरियो । उनले मानव जीवनको कामुताबारे खुलेर आफ्नो राय व्यक्त गरेकै कारण उनलाई ‘सेक्स गुरु’को संज्ञा पनि दिइयो । ओशोले ‘संभोगदेखि समाधीतर्फ’ को विचार व्यक्त गरे । अश्लिलता, कामुकता तथा युवाहरुलाई लिएर उनीबारे लामो समयसम्म एक किसिमको बहस समेत चलेको थियो । ओशो भन्छन्, ‘म… Continue reading ‘यौनलाई स्वस्थ रुपले स्विकार्नुहोस्’- ओशो
Categorized as Lifestyle, ओशो, यौन स्वास्थ्य
कुनै पनि चिजको लत एक किसिमको मानसिक विकृति हो । यसैगरी यौनको लत अर्थात् बार-बार यौनको बारेमा सोचिरहनु या कुनै पनि महिलालाई देख्ने बित्तिकै उत्‍तेजित हुनु पनि मानसिक समस्या हो भन्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । एक शोधका अनुसार जो मान्छेले यस मामलामा आफैँले आफैँलाई काबुमा राखेको हुँदैन उसले आफैँलाई नोक्सानी ब्यहोराएर बसिरहेको हुन्छ । मनोवैज्ञानिकहरू यस… Continue reading के हो यौन लत ? यसबाट कसरी पाउने छुटकारा ?
Categorized as Lifestyle, यौन समाचार, यौन स्वास्थ्य
काठमाडौं । नवरात्रि एक संस्कृत शब्द हो, जसको अर्थ हुन्छ नौ रातहरूको समूह । हिन्दू धर्ममा मनाइने चाडपर्वहरूमध्ये सबैभन्दा पवित्र मानिने नवरात्रि वर्षमा चार पटक मनाउने प्रचलन थियो । तर अहिले केवल दुई पटकमात्रै सर्वसाधारणले मनाउने चलन छ । हिन्दू धर्मको मान्यता अनुसार यी दिनमा हरेक घरघरमा देवी दुर्गाको नाममा जप्ने गरिन्छ । अधिकांश महिलाले… Continue reading के नवरात्रमा सहवास गर्नु हुँदैन ?
Categorized as Lifestyle, नवरात्रि, यौन स्वास्थ्य
दाम्पत्य जीवनमा यौनको खास भूमिका रहन्छ । श्रीमान र श्रीमतीबीच जति प्रगाढ र विश्वसनिय सम्बन्ध छ, उत्तिनै उनीहरुको यौन जीवन पनि आनन्दायक हुन्छ । तर, दम्पतीबीच गुनासो, अविश्वास, आशंका, असहयोगको स्थिति छ भने उनीहरुले यौन जीवनबाट भरपुर आनन्द लिन सक्दैनन् । यद्यपि कतिपय अवस्थामा हामीले चाहेर पनि आफ्नो यौन जीवनलाई आनन्ददायक बनाउन सक्दैनौं । यसमा… Continue reading के हामी आफ्नो यौन जीवनबाट सन्तुष्ट छौं ?
Categorized as Lifestyle, यौन जीवन, यौन स्वास्थ्य
नपुसंकता : कारण र उपचार
कुनै पनि व्यक्तिमा हुने प्रजनन् क्षमताको ह्रासलाई नै नपुंसकता भन्ने गरिन्छ । विभिन्न कारणले पुरुष या महिलामा समेत नपुंसकता हुने गर्छ । पुरुषमा नपुंसकता हुन्छ भने महिलालाई यही प्रकृतिलाई बाँझोपनाको नामले चिन्ने गरिन्छ । नपुंसकताको प्रकार र त्यसको कारण निम्नानुसारको छन् । नपुंसकता दुई किसिमको हुन्छ १ प्राथमिक नपुंसक यो किसिमको नपुंसकता त्यस्ता पुरुषहरूमा हुन्छ… Continue reading नपुसंकता : कारण र उपचार
Categorized as Lifestyle, नपुंसकता, यौन स्वास्थ्य
यौन सम्पर्क जिन्दगीको एउटा महत्वपूर्ण रमाइलो क्षण हो । यसलाई लिएर सबैको मनमा कैयौं किसिमका जिज्ञासाहरू समेत व्यक्त गर्ने गर्छन् । यससँग जोडिएका कैयौं जटिल विषयहरु हुन्छन् जसको बारेमा आजसम्म जवाफ पाउन मुस्किल छ । यो सवालको जवाफ खोज्नको लागि ती मान्छेहरु किताब या इन्टरनेटको सहारा लिने गर्छन् । तर कैयौं किताब र लेख पढ्दा… Continue reading सम्भोगका सीमा र सर्तहरु
Categorized as Lifestyle, यौन स्वास्थ्य, सम्भोग
सम्भोग आममानिस वा पशुपन्छीको लागि अत्यावश्यक कुरा हो । सम्भोगको तीव्र इच्छालाई दमन गर्ने हो भने यसले यौन गतिविधिमा नै सोच सीमित गर्न पुग्दा यसको सिधा असर अरु काममा समेत पर्न सक्छ । जसको यौन जीवन सामान्य हुन्छ, उनीहरुमा समेत यस्तो समस्या हुन सक्छ । यस्ता व्यक्ति यौन गतिविधि र कल्पनाहरुबाटै उत्तेजना महसुस गर्ने गर्छन्… Continue reading सम्भोगको लत के हो ?
Categorized as Lifestyle, यौन, यौन स्वास्थ्य